Juventus oo go’aamisay xiliga ay ku dhawaaqi doonto heshiiska Matthijs de Ligt – Gool FM
(Italy) 30 Juunyo 2019. Wargeysyada kasoo baxa gudaha dalka Talyaaniga ayaa waxay shaaca ka qaadeen maanta Axad ah in kooxda Juventus ay qorsheyneyso in si rasmi ah ay ugu dhawaaqdo dhameystirka heshiiska daafaca reer Holand iyo naadiga Ajax ee Matthijs de Ligt maalinka Isniinta ah ee soo aadan, kaddib markii ay heshiis la gaareen labada dhinac ciyaaryahanka iyo kooxdda Ajax Amsterdam.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Tuttosport” ee dalka talyaaniga Juventus ayaa kala heshiisay kooxda Ajax in 19 jirkan ay kaga soo qaadato aduun lacageed dhan 67 milyan oo euros, iyo 13 milyan euro oo ah lacagaha dhiiragalinta ama gunada.
Si la mid ah Matthijs de Ligt ayaa heshiis afka ah uu ku saxiixi doono qandaraas 5 sano ah, la gaaray kooxda Juventus, kaasoo uu sanadkii kaga qaadan doono mushaar gaarsiisan 12 milyan euro.
Yeelkadeeda, Juventus ayaa u muuqata inay ku garaacday loolanka ay ugu jirtay heshiiska daafaca reer Holand ee Matthijs de Ligt kooxo ay ka mid yihiin Barcelona, ​​Manchester United, Paris St Germain iyo Bayern Munich.
Waa sidee go’aanka kaga aadan aabaha dhalay Neymar Jr in markale uu dib ugu laabto kooxda Barcelona?
Arsenal oo ay qasab ku tahay inay bixiso qiimo dhan 100 milyan oo ginni si ay u hesho saxiixa ciyaaryahanka....